DHAMMAAN WAXA UGU MUHIIMSAN EE DIRXIGA EE BARADHO-BARADHO COLORADO BARADHO - BEER CAGAARAN
Hababka ugu muhiimsan ee wax ka qabashada dirxiga ee baradho baradho ah Colorado
Colorado duqsiyo - cadowga ugu weyn ee dalagyada khudradda.
Waxay khatar weyn ku tahay dalagyada sida: baradhada, basbaaska, yaanyada, ukunta.
Waa adag tahay in la dagaalamo dirxiga.sida dadka waaweyn, laakiin suurtogalka ah.
Ukunta qamadiga Colorado baradho
Inta lagu jiro xilliga taranta, haweenka baradho ah ee Colorado dhirtaa ukunta ka hooseysa caleen ee warshad, digaagga dirxiga laga bilaabo ukunta 5-17 maalmood.
Mating waxay u dhacdaa si aad u xooggan cimilada qorraxda leh. saacadaha galabtii. Xaalado aan fiicnayn ayaa jiifay ukumo. Inta lagu jiro xilliga xagaaga, haweenku waxay ka dhigi karaan 500 ilaa 1000 ukumood. Mid ka mid ah dhigista waa 25 ilaa 80 gogo '.
Ukumaha qaabka lafdhabarta ayaa leh dherer qiyaastii 2 mm iyo width ilaa 1 mm. Midabka ukunta waa mid aad u kala duwan - laga bilaabo iftiin jaalaha ah ilaa orange dhalaalaya.
Dumarka waaweyni waxay dhigaan ukumo badan oo madow.marka loo eego dadka dhalinyarada ah. Heerkulka ugu fiican ee horumarinta xuddunta waa qiyaastii 10-13 digrii, si kastaba ha ahaatee, ka bixidda dirxiga oo keliya heerkul aan ka yarayn 15 darajo.
Horumarka caadiga ah ee dhogorta wuxuu dhacaa heerkul ah 20-33 digrii. Ka dib horumar horumarineed oo soconaya 2-3 toddobaad, waxay ku socdaan dhulka loogu talagalay ardayda.
Maxay u egtahay?
Haramaha ka mid ah baradho baradho ah Colorado waa cayayaanka leh dhabarka gadaal iyo hoose. Waxay leeyihiin cabbir caddaad ah oo ilaa 16 mm ah.
Maadaama uu ubaxa korayo oo uu kobcayo, midabkeedii qolofka wuxuu ka beddelaa casaan-casaan ilaa casaan leh jilicsan huruud ah. Farqiga muuqaalka u dhexeeya dirxiga ee baradho-baradhada Colorado waa joogitaanka laba saf oo dhibco mug leh dhinacyada.
Da 'yar yar dirxiga wuxuu ku quudiyaa oo keliya caleen yar dhirta. In marxaladaha ugu dambeeya ee koriinkedu, dirxiga wuxuu burburiyaa caleemaha yar yar, caleemaha caleen, xididada yaryar iyo xitaa dhirta deriska ah.
Marxaladda koowaad ee horumarinta ubaxa waa in la cuno saxarada caleen si ay u kordhiso xajmigeeda. Waxay lafteeda ku taallaa meel u dhow meellaha sare ee sare ee caleenta.
Marxaladda da'da labaad dirxiga oo xoogga saaraya geedi socodka sii kordhaya ee afkoda.
Marxaladda seddexaad ama afaraad, dirxiga ayaa bilaabay inuu cuno qayb ka mid ah geedka. Dhallaanka ayaa si joogto ah isbeddelaya qolofka marka uu korayo.
Maqalka ayaa dhacaya wiiga labaad ee koritaanka. dirxiga carrada ee qoto dheer oo ah 10-15 cm Dhaqtarku wuxuu keenaa dhaawaca ugu yar ee warshadda, tan iyo cayayaanka dhulka hoostiisa oo aan cunin caleemaha illaa 20 maalmood.
Bilowga horumarka, pupa waa mid guduudan, si tartiib tartiib ah ayay u noqotaa caddaan-cadaan. In size, waxay u egtahay qof weyn oo baradho Colorado baradho. Dhererka 1 cm, ballaadh ilaa 0.5 cm.
Sidaas sida loo takhaluso dirxiga ee baradho baradho Colorado ah? In dagaalka ka dhanka ah dirxiga ee Colorado baradho baradho waa ka wanaagsan si loo siiyo doorbidka hababka dadweynaha. Sunta iyo kiimikada waxay abuurtay qadar weyn, laakiin ha ilaawin in mustaqbalka miraha geedka ay ku dhici doonaan miiska cuntada oo ay weheliyaan sunta ku dhacday.
Habka ugu waxtarka badan iyo kan ugu da'da weyn ee wax looga qaban karo dirxiga ee baradho baradho ah Colorado waa ururinta farsamada iyo burburinta. Dhammaan dirxaha waa in lagu soo ururiyaa weel qoto dheer leh milix xoog leh.
Waa in aanad waligood ku burburin inta u dhaxaysa dhirta dhirta., dhogorta ayaa ku noolaan karta oo bilaabi kartaa inuu dib u cuno dalagga. Kormeer joogto ah oo ku saabsan abuurista, waxaad badbaadin kartaa shaqadaada (haddii uusan garoonka uusan ahayn mid aad u ballaaran). Dhismayaasha waaweyn, qaabkani waa mid aan waxtar lahayn.
Hab kale oo dheer oo ku saabsan la tacaalidda dirxiga ah ee baradho baradho Colorado waa pollination leh dambas. Inta lagu jiro pollinimada, waxaa fiican in la siiyo doorbidada ash bood ah., waxay si fiican u soo saaraan dirxiga.
Nidaamka waa in la sameeyaa subaxdii marka ay jiraan weli dhoobo dhibcaha on caleemaha. 1 qashin oo dhul ah waxay qaadataa qiyaastii 10 kg oo ashXitaa xaddigan, ka dib dhowr maalmood, dirxiga ee Colorado baradho baradho way dhiman doonaan, sida dadka waaweyn dadka. Nidaamka maadaysiinta cawska ayaa la samayn karaa 1 mar 2 toddobaadkiiba. Ka dib markii ubaxyada dhirta, budada waa inay noqdaan hal mar bishii.
Halkii qashinka waxaad kaloo isticmaali kartaa burka hadhuudhka ah, kaas oo barara caloosha lafaha iyo dila, iyo sidoo kale cyad ama qalajiyaha qalalan. Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad ku shub balka cusbada u dhexeeya saf dhirta. Lamaanayaashii Colorado waxay aad u nugul yihiin urka qoryaha, waxay dhaafi doonaan beerta oo ma jiifin doonaan ukunta.
Sidoo kale, si looga hortago in ay soo baxaan ukunta iyo dirxiga waa in ay noqdaan baradho sarreeya. Caawinta dagaalka iyo cayayaanka kale ee beerta - quraanjada. Baradarka barafka Colorado uma dulqaadan karo xaafadaha cayayaankaas.
Waxaad dhali kartaa dhirta meel u dhow berrinka, urta taas oo duqsigu si fudud uma dulqaadan karo:
Sunta ka soo duudduubka baradhada Colorado iyo dirxiga Bitoxibacillin waxaa loo isticmaalaa heerkul aan ka yarayn 18 darajo. Qiyaasta waa 50-100 garaam. 10 litir oo biyo ah. Daweynta dhirta waa inay ahaataa 3 jeer xilli. iyadoo isbeddel wakhti toddobaad ah.
Daroogadu waxay ka dhigtaa lafdhaca dirxiga, waxay joojiyaan quudinta, xayawaanku waxay bilaabaan inay muuqdaan calooshooda, taas oo caleemaha u leexisa caleenta. Laga soo bilaabo boobooyinka sida duqsiyo, ma awoodo in dhalmo u muuqato.
Sida loo baabiiyo dirxiga ee Colorado baradho baradho leh diyaarinta Bicol? Daawooyinka dhirta leh daawadani waa inay ahaataa ilaa 3 jeer xilli. Qiyaasta waa 20 garaam. 10 litir oo biyo ah. Wareegga u dhaxeeya waraabinta waa in la sameeyaa todobaad.
Jiil kasta oo ka mid ah kuwa lamid ah sunta ka soo Colorado baradho baradho iyo dirxiga Colorado waxaa lagu shaqeeyaa 2 jeer wakhti wiig ah. Qiyaasta 10 litir oo biyo ah waa 150 garaam.
Daroogada cusub marka cayayaanka la cunay uu keeno curyaandabadeedna dhimasho. 10 saacadood ka dib daawaynta, dirxiga ayaa joojiya quudinta, oo u dhinto 3-6 maalmood. Daroogadu ma saameyneyso ukunta lamid ah.
Waxaa jira on sale iyo sunta sunta ka soo dirxiga ee baradho baradho Colorado: Bankol, Konfidor, Aktara iyo kuwa kale. Warshaduhu waxay sheeganayaan inay yihiin gabi ahaanba u badbaado jidhka bini'aadamka mana heystaan ​​wakhti aad ku tagi kartid, jabinaysid walxo aan sun ahayn.
Haddii ay jirto shaki ku saabsan nabadgelyada dalagga, waxa fiican inaad isticmaasho habka noolaha ama habka farsamada hore.